Kitapom-panampiana ho an'ny mpivahiny ~ Journey-Assist - kitapo fanampiana fanampiana voalohany ho an'ny ankizy iray
Pejy fandraisana » Torohevitra mahasoa Travel » Kitapo-fanampiana voalohany
Avy amin'ny olan'ny vavony: Saribao navitrika, Smecta, Mezim.
Kitapo fanampiana vonjy voalohany ho an'ny CHILD amin'ny fitsangatsanganana (kitapo vonjy ho an'ny ankizy)
Antipyretic. Kandeta Tsefekon. Syrup Nurofen.
Kitapo-fanampiana voalohany ho an'ny zazakely
Kitapo fanampiana voalohany any Azia. endri-javatra
Kitapo fanampiana vonjy taitra
Raha mikasa ny fitsangatsanganana be dia be ianao amin'ny alalàn'ny masin-jazakely (sarotra), ny fanjonoana na zavatra hafa ivelan'ny any ivelany, dia miompana amin'ny fehikibo miendrika amin'ny fako, raha maka sprains koa, dia makà gels sy fantsom-bolo koa.
Kitapo-fanampiana voalohany amin'ny fialantsasatra amoron-dranomasina
Raha toa ianao ka ho any amin'ny toerana be masoandro, izay fialan-tsasatra amoron-dranomasina, dia mila vola avy amin'ny sunburn: Panthenol, Lifeguard. Ny crème before and After Tanning dia ho asaina ihany koa. Aza adino ny mitondra crème SPF 30-50 miaraka aminao, raha toa ka misy masoandro betsaka kokoa noho ny tanibe-sôkôla tan :).
Kitapo fanampiana voalohany momba ny dia an-dranomasina
Ary aza adino fa mandritra ny fitsangatsinan-drivotra, raha misy ny famerana ny fitaterana ranon-tànana amin'ny kitapo-tànana. Tsy mihatra amin'ny olona manana aretina mitaiza izay mitaky fanafody tsy tapaka. (aza adino amin'ity tranga ity ny fanamarinana momba ny teny anglisy amin'ny fanamarinana io tranga io).
Aza hadino hatrany fa any ivelany, eny fa na dia fanafody tsy manara-penitra manokana aza dia azo vidiana eny amin'ny pharmacy. Ampy izany mba hahafantarana ny anarany iraisam-pirenena. Ireo anarana ireo dia mety ho hita ao amin'ny tranokala. World Health Organization amin'ny ity rohy ity. Ao amin'ity loharanom-pahalalana ity dia midira amin'ny tsipika "anarana ara-barotra" anarana izay fantatrao. Ary ny programa dia hanome anao ny mazoto mazoto amin'ity fanafody ity, izay ilainao angatahana amin'ny fivarotam-panafody.